Foara ho an'ny faritra 23 satria mila mifanohana, mifamelona ary mifandray tanana ny mpandraharaha - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Foara ho an'ny faritra 23 satria mila mifanohana, mifamelona ary mifandray tanana ny mpandraharaha
Rasolonjatovo Willy il y a 15 jours
Hanatanteraka foire économique et commerciale des 23 regions ny Madavision ny 28-29-30-31 oktobra 2021. Hetsika atao amin’ny faritra 23. Izany no nambaran’ireo tompon’andraikitra ao amin’ity orinasa ity nandritra ny famelabelaran-kevitra nataon’izy ireo teny Alarobia ny alarobia 1 septambra.
Sahirana ireo mpandraharaha taorian’ny hamehana ara-pahasalamana teo ireny. Tsy nihodina ny orinasa, misy ary ireo voatery nanakatona ny orinasa, na koa voatery nampihena ireo mpiasa.
Manoloana izany anefa dia lehibe Madagasikara ka betsaka ireo zavatra tsara hatao nefa tsy ampy ny fahafantarana azy na tena tsy fantatra mihitsy. Tena malalaka ny lalam-barotra, na tsy hiresaka afa- tsy ny tsena eto an-toerana ihany aza. Azo ampiasana tsara ny tsena eto an-toerana na dia ifamezivezen’ny vola fotsiny aza. Mila ampiasaina ny vola fa raha tsy izany tsy mitombo. Araka ny nambaran’i Harilala Ramanantsoa tompon’andraikitra ao amin’ny Madavision dia « isika mpandraharaha amin’ny faritra 23 no kitro ifaharan’ny fampandrosoana eto Madagasikara, mila sehatra ifandraisana isika.» Mifanampy fa tsy mifamingana. Izay no hifampiresahana. Tsy mampandroso raha isehatra amin’ny sehatra iray ihany ny rehetra. Misy manko ireo maka tahaka fotsiny. Rehefa mahita fa mandeha ny fivarotana fripy dia lasa manao io avokoa. Betsaka anefa ireo azo atao izay ilain’ny mpanjifa no tsy misy manao. Na dia lazaina foana fa ny 80% ny Malagasy dia misehatra eny ambanivohitra dia hita mivaingana fa mbola manafatra vary isika hatramin’izao. Ny vary izany dia isan’ireo zavatra tena ilain’ny Malagasy amin’ny fiainana andavanandro. Tsy tokony hisalasalana ny hamokarana azy, ny tany malalaka, ny vokatra hiakatra azo antoka fa betsaka ny hanjifa azy. Isany nambaran’Atoa Filoha Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra ny hamokarana ny zavatra ilain’ny mpanjifa malagasy eto an-toerana.
Maro ireo zavatra hita mandritra ny foire toy ny trano heva an’ireo mpandraharaha ara-toe-karena, ahitana ireo vaovao isan-karazany entina mandraharaha, ahafahana mahita ireo tolotra sy tinady.
Eo ihany koa ireo toerana ahafahana mamantatra ireo andrim-panjakana toy ny Prezidansa, Primatiora, Governementa, Antenimierandoholona, Antenimieram-pirenena. Hita mandritra izany ihany koa ireo vondrona sy fikambanana iraisam-pirenena…
Voalohany no ahitana tsenabe manerana ny faritra 23 izao ahafahan’ny mpandraharaha isam-paritra miseho sy mampahafantatra ny asa ataony, ahafahany ihany koa mifandray sy mahazo toro-hevitra amin’ireo namana mpandraharaha ihany koa. Ny irariana dia ny ivoaran’ny fandraharahana eto amintsika aorian’izao hetsika izao, mba hifanohana sy hifamelona ary hifandray tanana ny mpandraharaha, indrindra ny mpandraharaha malagasy fa tsy hifanipaka toy ny valala an-karona satria ny fifampihainoana sy ny fifampiresahana no mampilamina sy mampandroso raha tena hitsinjo ny soa iombonana isika.